Yamaniin waancaa Eeshiyaatif kan gahe leenjisaa lammii Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Yamaniin waancaa Eeshiyaatif kan gahe leenjisaa lammii Itoophiyaa
Image copyright Alkass
Biyyattiin waraanaan raafamaa jirtu Yaman, seenaa biyyattii keessa yeroo jalqabaaf Xumura Waancaa Eshiyaa Emireetota Arabaa Waltahanii (UAE)tti gaggeeffamuuf geesse.
Leenjisaan garee kanaas lammii Itoophiyaa kan tahan Abrahaam Mabaraatuuti.
Gareen kun xumuraaf gahuusaanii kan baran, erga tapha Maanilaati taasifameen Filippiins 2-1 Taajikistaan mo'atanii boodadha. Yamanis tapha magaalaa guddoo Kaataar, dohaatti taphatameen, qabxiidhuma walfakkaatuun Neeppaal mo'atte.
Leenjisaan kun erga garee Yaman leenjisuu jalqaban ALA Bitooteessa 2016rraa eegalee, xumura waancaa kana gahuuf hin moo'amne. Konfedereeshinii Kubbaa miilaa Afriikaa CAF irraa gahumsa leenjisummaa kan qaban Obbo Abrahaam Mabraatuun, BBCtti guddoo gammaduu isaanii dubbatan.
''Garee biyyaalessaa kana leenjisuun Waancaa Eshiyaatif gahuu kootiin gammachuu guddaan qaba. Yamaniif chaampiyoonaa kanarra hirmaachuun isa jalqabaati. Qabxii kana fiduu keenya wayitan ilaalu, dhugaa natti hin fakkaatu. Karaan irra dhufnee as geenyees rakkoofi hudhaalee baayyeen kan guutaman turan.''
Galchii Abdulwaaseyaa al-Mataariin lakkoofsiseen gareen Yaman 2-1 Neppaal injifachuu danda'eera. Leenjisaa Abrahaam kanaan duras garee Yaman umrii 23n gadii waliin 2013tti Waancaa Eeshiyaa U-23 irratti hirmaataniiru. Biyyattiin waraanaan raafamte tun gammaduuf sababa tokko argataniiru.
''Yemen keessa waan waraanni jiruuf, 2014 as taphni hinturre. Haalli suukanneessaan kun taphattoota biyyoolessaa walitti qabuun akka dorgoman gochuuf qormaata guddaa fi sodaachisa ta'e tureera. Haa ta'u malee, dhumarratti gartuu cimaa kan hanga xumuraatti dorgomuu danda'e tokko argachuu dandeenyeera.
Taphoota dirree keenyarratti taphachuu mallu hunda biyya keenyaan ala deemuun akka taphannu taanus, bu'aa ba'i baay'ee keessatti qabxiilee gaggaarii arganneen yoo xiqqaate, lammiilee Yaman hundi sagalee tokkoon akka gammadan taasiseera. Akka lammii Itoophiyaatti, tattaaffiin koon as gahuu danda'uu isaaniin nan boona.''
Abrahaam taphataa kubbaa miillaa beekamaa ta'uu cinatti, walakkeessa 1990' oota eegalee leenjisaa kilabootaa ta'uunis muuxannoo guddaa nama horateedha.
Bara 2016 keessa leenjisaa garee biyyooleessa Yemen utuu hinta'in dura Darikteera Waldaa Kubbaa Miillaa Yaman ta'uun bara 2012 keessa hojii jalqabe. Akkasumas leenjistoota Itoophiyaaf leenjii CAF kennaas tureera.
Namni lammii Itoophiyaa ta'e tokko garee biyyooleessaa kan biyya ambaa dorgommi guddaa akkanaarratti leenjisaa tahu, seenaa keessatti kun yeroo jalqabaati.
Abrahaam Bitootessa 2017 keessa leenjisaa garee biyyaalessaa Itiyoophiyaa ta'a jedhamaa turuus, fedhii dhabuusaatiin Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itoophiyaa ji'a ittaanu keessa Ashannaafii Baqqalaa qaxare.
Joorj Wiihaan pirezidantii Laayibeeriyaa ta'un filame
Gaafa Kaataalaan foxxoqxe Baarseloonaan eessatti taphata?